Họtelu oka ibe na Akwa Ibom di na Jumia Travel - Onu ahia na ihe Nyocha
Họtelu Akwa Ibom
Ime nleta na Akwa Ibom Steeti
Akwa Ibom bụ otu steeti na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke Nigeria nke ya na Cross River Steeti na obodo mba-miri (Rivers State) nwere ókè ala di ka ndi agbata obi ya. Steeti Akwa Ibom bu nke a na ahuta dika obodo ndị kasị elu na Nigeria ndi esi na obodo ha enweta mmanụ ugboala na mmanụ ọkụ.
Ala nke nkwa (Land of Promise) bu aha ejiri mara Akwa Ibom Steeti, o nwere obosara oké ọhịa mmiri nke okpomọkụ bu nke otutu ndi bi na ya bu ndi Ibibio ndị na- aru ọrụ ugbo; na akoputa ihe akumaku ndi dị ka ji, osikapa, akpu na mmanụ nkwụ. Obodo Uyo di ezi nma, bụ isi obodo nke Akwa Ibom Steeti. Maka azụmahịa ma ọ bụ maka ubochi ezumike, Akwa Ibom bụ obodo iga njem nleta.
Ebe ndi di nkpa nwere ihe Mmasi
Obodo ndi di na Akwa Ibom ndi di ka Eket, Uyo na Ikot Ekpene bu ufodu ebe ndi amama na Akwa Ibom. O bu Steeti nwere ndi ezi madu bu ndi enyi, bu obodo di nma nke maka ikuru ume ndu. Otutu ụlọ akwukwo ndi di elu bu nke di na Akwa Ibom, bu ndi dị ka ụlọ akwukwo mahadum nke Uyo, ụlọ akwukwo nke ndi agha mmiri nke Nigeria (Maritime Academy of Nigeria) nke di na Oron , ụlọ akwukwo nke nkà na uzụ (College of Arts & Sciences) na ulo akwukwo mahadum nke Akwa Ibom steeti.
Otu n’ime ebe a na apughi iga njem leta bu ogbo egwuruegwu ukwu nke mba uwa nke Akwa Ibom steeti wuru ọhụrụ nke akporo (Akwa Ibom International Stadium) bu nke ewuru di ka mbara ogige Allianz. Ámá egwuregwu ukwu bu nke agbapere nime onwa iri na otu na afo 2014. Ebe njem nleta ndị ọzọ bụ oke osimiri nke Ibeno (Ibeno Beach), ogige ebe ihe ngwa agha ochie nke di na Oron (Oron Museum) na Mobil tank Farm.
Ebe omumatụ maka onunọ
Nweta obi ụtọ maka onunu site na inọ na họtelu ndi di nma nke ukwu na Akwa Ibom bu ndi dị ka: Le Meridien Ibom Hotel & Golf Resort nke eji nhazi kpakpando ise mara udi ya. Họtelu a bu nke amara dị ka 'Ugwu nke Akwa Ibom Steeti' o bu kwa ihe doro anya na iga enweta oké ihe nlekota onye ọbịa nke Akwa Ibom na họtelu a. Site na idabere na akuku ebe ị na aga njem neleta, ị ga-ahụkwa họtelu ndi di ọnụ ala na Akwa Ibom bu ndi dị ka Grand Eti Họtelu .
Họtelu Uyo Họtelu Eket Họtelu Oron Họtelu Ikot Ekpene Họtelu Abak Họtelu Ikot Abasi
Họtelu Itu Họtelu Ibesikpo-Asutan Họtelu Mkpat-Enin Họtelu Ibeno Họtelu Lagos Họtelu Ogun